Mg Thant: Bigger ကြိုက်တဲ့ တက္ကစီဆရာ
Bigger ကြိုက်တဲ့ တက္ကစီဆရာ
စင်ကာပူမှာပေါ့ တက္ကစီစီးဖူးတဲ့ လူတိုင်း စင်ကာပူ တက္ကစီတွေ တက္ကစီဆရာတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ထူးခြားတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ရှိဖူးမှာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ထူးထူးခြားခြားကြီတော့ မဟုတ်ပေမယ့် အမှတ်ရနေတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခု သတိရလို့ ပြောပြချင်တယ်။
(Photo - Mg Thant)
စင်ကာပူ တက္ကစီတွေမှာ သူ့ဓလေ့နဲ့ သူရှိတယ်။ ပုံမှန်အချိန်ဆိုရင် စင်ကာပူက တက္ကစီတွေဟာ အမောက်စိမ်းစိမ်းလေးတွေနဲ့ Available ဆိုပြီး တော်တော်များ လမ်းပေါ်မှာ သွားနေကြတာ စင်ကာပူမှာ တက္ကစီတော်တော်ပေါပြီး လိုချင်တဲ့အချိန် လမ်းပေါ်ထွက်တားလိုက်ရုံနဲ့ ရတယ်လို့ ထင်ရင် မှားလိမ့်မယ်။ စင်ကာပူက တက္ကစီတွေဟာ ပုံမှန်မှာသာ အခုလို လမ်းပေါ်ရောက်နေပြီး ဥပမာ မနက်ရုံးသွားချိန်မှာ မိုးရွာလို့ ဘတ်စ်ကားနဲ့ ရထားနဲ့ သွားဖို့ ခက်ခဲနေရင် လမ်းပေါ်ထွက်တားတောင် အမောက်နီနီနဲ့ Busy ပြနေတဲ့ တက္ကစီတွေပဲ တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဒါနဲ့ On Call လို့ ခေါ်တဲ့ သူတို့ တက္ကစီကုမ္ပဏီကို ဖုန်းခေါ်ပြီး အော်ဒါလုပ်လိုက်ရင်တော့ ကိုယ့်ရှေ့ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာတတ်တယ်။ On Call ခတော့ ၂ကျပ်ခွဲကနေ ၃ကျပ်ခွဲထိတော့ အပိုပေးလိုက်ရပြီးပဲ... ဒါမျိုးကိုစောင့်နေကြတာပေါ့... ဒီလိုပဲ ည ၁၁နာရီ ၁၁နာရီခွဲလောက် အချိန်မျိုးဆိုရင်လည်း သူတို့တွေ လမ်းပေါ်မှာ မရှိလောက်အောင် ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ ညနက်ရောက်သွားလို့ တက္ကစီ ရှားသွားတယ် မထင်ပါနဲ့ ည ၁၂နာရီကျော်ရင်တော့ တက္ကစီတွေ ပြန်ပြီး လမ်းသလားနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန် စီးမိရင်တော့ စီးမိသလောက် မီတာကုန်ကျစရိတ်အပြင် အပိုထပ်ဆောင်း ၅၀ရာခိုင်နှုန်း ညနက် ပြေးဆွဲခအဖြစ် ပေးရတာပဲ.. ဒါကတော့ တက္ကစီတွေ လမ်းပေါ်မှာလုပ်စားတတ်တဲ့ ဓလေ့ပေါ့လေ...
နောက်ထပ် တက္ကစီဆရာမျိုးစုံရဲ့ ဓလေ့တွေလည်းရှိတယ်။ များသောအားဖြင့် စင်ကာပူက တက္ကစီဆရာတွေက စိတ်ချရပါတယ်။ ဥပမာ လမ်းတွေ ပတ်မောင်းတာမျိုး လူကို အန္တရယ်ပြုတာမျိုး ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါတယ်။ ပစ္စည်းကျန်ခဲ့တာမျိုးကတော့ ပြန်ရဖို့ကတော့ ငါးဆယ် ငါးဆယ်ပေါ့... အဲ တက္ကစီစီးကြပြီး ဆိုရင် တခါတလေ တစ်ယောက်လည်း စီးဖြစ်ရင် စီးဖြစ်မယ်။ အများနဲ့လည်း စီးဖြစ်ရင် စီးဖြစ်မယ်။ အထူးသဖြင့် တစ်ယောက်တည်း စီးမိတယ် အခါမျိုးဆိုရင် တက္ကစီဆရာတွေက အလ္လာပ သလ္လာပတွေ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်တွေကို မြန်မာတွေမှန်း သိတာနဲ့ အများအားဖြင့် နိုင်ငံရေးနဲပက်သက်တာ မေးကြပြောကြတာများပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရေး အကြောင်းပြောရင်း သူတို့နိုင်ငံရေး အကြောင်း ဝေဖန်တာမျိုးက ရိုးနေတဲ့ ဇတ်လမ်းတပုဒ်လိုပါပဲ... အများဆုံး အမေးခံရတာကတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်ဆောင် The Lady လို့ သူတို့ခေါ်ကြတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းပေါ့။ တခါ ကျွန်တော့် အဖေနဲ့ အမေလာလည်တော့ တက္ကစီတခါစီးတိုင်း တက္ကစီဆရာတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းပဲမေးနေတော့ ကျွန်တော့်အဖေတောင် သြချသွားပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတောင် အရင်က သူ့နာမည်ကို ဒီလောက်မကြားရဘူးကိုး...
အဲဒီလိုပြောလို့ တက္ကစီဆရာတိုင်း လေကြွယ်တယ် မထင်ပါနဲ့ အချို့တက္ကစီဆရာဆိုရင် ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ နေရာ သူတို့တန်းသိတယ်ဆိုရင် တက္ကစီပေါ်ကနေ ဆင်းသာသွားမယ် စကားတခွန်းမဟတာလဲ ကြုံဖူးတယ်။ ကဲလာပါပြီး... စင်ကာပူမှာ တက္ကစီစီးတဲ့အခါ ကသိကအောက် အဖြစ်ဆုံး အနေအထားကတော့ တက္ကစီဆရာက အဂ်လိပ်လို မပြောတတ်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ပြောတဲ့ အဂ်လိပ်ကို သူတို့ နားမလည်တဲ့အခါပါပဲ... တခါတလေများ ကိုယ်တခွန်းပြော သူတို့နားမလည် သူတခွန်းပြော ကိုယ်ကနားမလည်နဲ့ တလမ်းလုံးတောင် စကားများသွားရတယ်။ အဆုံးစွန်ဆုံး ကိုယ်ပြောတာ သူနားမလည်လို့ တက္ကစီပေါ်ကနေတောင် ဆင်းသွားရတဲ့အခါရှိတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ သူတို့ အဂ်လိပ်လို လည်လည်ဝယ်ဝယ် မပြောနိုင် ကိုယ်ပြောတာကို သူတို့နားမလည်နိုင်တာကို သူတို့ရဲ့ အားနည်းချက် သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်လည်းပါတယ်လို့ မယူဆဘဲ သူတို့ကပဲမှန်တယ် သူပြောတာ နားမလည်ရင် ဂျောင်း ကိုယ်ပြောတာ သူနားမလည်ရင် ကိုယ့်ကို ပြန်ဟောက်တာမျိုး ကြုံဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။
လာပါပြီး.. နိဒန်းကို အရှည်ချီပြီး ဇတ်လမ်းကို စမယ်... ကန့်လန့်ကာဖွင့်... :P
တရက်ကပေါ့ မြန်မာပြန်ကို အလည်ပြန်ပြီး ပြန်လာတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက်ကို ချန်ဂီလေဆိပ်မှာ သွားကြိုပါတယ်။ အပြန်တော့ အထုတ်အပိုးတွေနဲ့ဆိုတော့ ရထားမစီးတော့ဘဲ တက္ကစီနဲ့ ပြန်တာပေါ့။ အဲဒီအချိန် စင်ကာပူမှာ ရာသီဥတုကလည် အရမ်းပူနေတဲ့အချိန်... လေဆိပ်မှာကျတော့ တက္ကစီငှားချင်တဲ့အခါ သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ တန်းစီပြီးတော့ စီးရတာ... အလှည့်ရောက်တော့ တက်လိုက်ပါပြီး တက္ကစီတစ်စီး တက္ကစီပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်သွားမယ့်နေရာကို ပြောလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ တက္ကစီဆရာမျက်နှာကို အနောက်ကနေ အကဲခတ်လိုက်တယ် သူနေရာကို သိလားပေါ့... ဒါပေမယ့် သူ့မျက်နှာက သိတယ်လည်း မဆို... မသိဘူးလည်း မဆိုဘဲ မှုန်ကုတ်ကုတ်နဲ့ ဒါနဲ့ ကိုယ်လည်း ဘာမှဆက်မပြောဘဲ သူမောင်းတာ လမ်းမှားမှ ပြန်တည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီး... ကိုယ့်အချင်းချင်းပဲ စကားပြောနေလိုက်တယ်... ဒါနဲ့ တက္ကစီက အဝေးပြေး လမ်းမပေါ်ရောက်တော့ တစ်ခုခုခံစားလိုက်ရတယ်... အရမ်းပူတာပဲ... အပြင်က အရမ်းပူနေလို့ ကားထဲက အဲကွန်းကပဲ မနိုင်တာလားဆို... ကားဒက်စ်ဘုတ်ဆီကို ကြည့်လိုက်တယ်... မဟုတ်ပါဘူး.. တက္ကစီဆရာက အဲကွန်းကို လျှော့ထားတာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒါနဲ့ သူ့ကို လှမ်းပြောလိုက်တယ်
Hi, can you please increase the aircon? we feel hot.
ဆိုပြီး တခါတည်း နားလည်အောင် ခပ်လွယ်လွယ်ပဲ ပြောလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာသမားက တုတ်တုတ်မျှ မလှုပ်၊ မကြားတာဘဲလား ဆိုပြီး နည်းနည်း ထပ်ကျယ်ကျယ် ပြောလိုက်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ နောက်ကြည့်မှန်ကနေ ကိုယ့်ကို ဘုပြန်ရှိုးတာ တွေ့လိုက်သည်။ ဟိုက် အဲလိုချည်းလားဆိုပြီး ထပ်မပြောတော့ဘဲ ငြိမ်နေလိုက်တော့သည်။ ဘာကြောင့် မှန်းကိုမသိ... နားမလည်တာလား.. တမင် မလုပ်ပေးချင်တာလား .. ဒါပေမယ့် ပါလာတဲ့ ညီမလေးကိုယ်တိုင်က လေယာဉ်စီးလာလို့ ညီစီစီ ဖြစ်နေချိန် ကြာလာတော့ သူတော်တော်မွန်းလာတာကြောင့် ကျွန်တော့်ကို ထပ်တောင်းဆိုဖို့ ပြောသည်။ ကျွန်တော်လည်း ကီသွင်းကာ ရှေ့ကိုနည်းနည်းတိုးပြီး...
Uncle, can you pleaseee increase the aircon? aircon aircon... increase increase...
ဆိုပြီး aircon ခလုတ်ကို လက်ညိုးလည်းထိုး လက်ညှိုးနဲ့ လက်မနဲ့ လှည့်သလိုလဲ လုပ်ပြ... သို့သော် ဆရာသမားက မျက်လုံးလေး ထောင့်ကပ်ပြီး ကြည့်ရုံကြည့်ပြီး ကားကိုပဲ မဲမောင်းနေသည်။ တော်တော်လေသွားပြီး ငါတို့နှယ် ကံဆိုးလေစွဟုသာ သက်ပြင်းချမိသည်။ နောက်ပြန်ထိုင်ချကာ မမူးစေရန် ညီမလေးကို စကားမပြောခိုင်းတော့ဘဲ အပြင်ဘက်ကိုပဲ အာရုံလွှဲ ကြည့်ခိုင်းဖို့ ပြောရသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အပြင်ဘက်ကို သက်ပြင်းချရင်း ငေးနေရတော့သည်။ မှန်ကလည်း ဖွင့်လို့မရတော့... လေဆိပ်နဲ့ အိမ်မှာလည်း အနည်းငယ် ဝေးသောကြောင့် တော်တော် သည်းခံရဦးမည်။ သို့သော် ငါးမိနစ်ပင် မကြာလိုက် ကားထဲမှာ အေးလာသလို ခံစားရသည်။ လေကောင်းကောင်း ရှူရသလို ခံစားလာရသည်။ ဒါနဲ့ ရှေ့ကို ပြန်ကြည့်တော့ ကားဆရာမှာ အဲကွန်းကို မြှင့်နေတာ တွေ့ရသည်။ ၀မ်းသာလိုက်သည် ဖြစ်ခြင်း.. ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် သူ့ကို
Thanks you ... Oh Thanks you very much.. That's what I meant .. increase the aircon increase the airon
ဆိုပြီး ၀မ်းသားအားရ ပြောလိုက်မိသည်။ အဲဒီမှာ တက္ကစီဆရာက ကျတော့ဘက် လှည့်လာပြီး...
What meant increase... what increase aircon... BIGGER lah.. BIGGER the aircon... BIGGER.. BIGGER.. YOU.. AHH... Aiyo.. walah
ဘာညာ ဆိုပြီး ကျတော့ကို ကုန်းအော်လေတော့သည်။ ကျတော်လည်း ရုတ်တရက် ကြောင်သွားသည်.. နောက်တော့ သူဘာဆိုလိုချင်မှန်း သဘောပေါက်သွားသည်။ သူ့မှာ ကျနော် ပြောတဲ့ increase the aircon ကို နားမလည်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျတော်တို့ ဘာဖြစ်နေမှန်း ဘာလိုချင်နေမှန်းတော့ သဘောပေါက်ပုံတော့ရသည်။ သူ့စိတ်ထဲမှာ increase the aircon က ပြောပုံမှားနေပြီး bigger the aircon ကမှ အမှန်... ကျတောတို့ အမှန်မပြောနိုင်တော့ သူကမာနနဲ့ မလုပ်ပေးချင်တာလို့ ထင်သည်။ ကျနော်လည်း ဘာမှထွေထွေထူး မပြောနေဘဲ
Yes Sir.. Yes Sir.. Anyway Thanks you so much
လို့သာ ပြောလိုက်တော့သည်။ သြော် bigger the aircon တဲ့လား... အဲကွန်းကို ပိုကြီးအောင် လုပ်လိုက်ရင် ပိုအေးသွားတာပေါ့နော်... မှတ်သားလောက်ပါတယ်.. ဒါနဲ့ပဲ ညီမလေးဘက်လှည့်ပြီး ညီမလေး အဲကွန်း ဘစ်ကား လုပ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နော် အခု အဆင်ပြေသွားပြီ မမူးတော့ဘူး မဟုတ်လား မေးရာ ညီမလေးက အင်း ဘစ်ကားလုပ်လိုက်တော့ မမူးတော့ဘူး အဆင်သွားပြီး ပြန်ပြောတော့ ကျွန်တော် နှစ်ယောက်လုံး အိမ်ရောက်တဲ့အထိ ရီလို့ မဆုံးတော့ပေ........
(ဒါလေး ပြောပြဖို့ နိဒါန်းအရှည်ကြီးချီတာ ခွှင့်လွှတ်ပါ။ ဒီက တက္ကစီအကြောင်း သိစေချင်လို့ပါ ခင်ဗျာ)
အောက်မှာ အနောနီးမတ်စ်က "Increase the Aircon" ဆိုတာရော မှန်ရဲ့လားလို့ မေးထားပါတယ်။ စင်ကာပူက မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆရပါတယ်။ စင်ကာပူကဆိုရင် ဒီလိုဘာကြောင့် ပြောတာနားလည်မှာပါ။ ဒီလင့်ခ်မှာ သွားဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်။ ရီလည်း ရီရသလို ဒီကလူတွေရဲ့ ဓလေ့ကို သဘောပေါက်သွားမယ် ထင်ပါတယ်။
Vista November 10, 2011 at 4:02 PM
အဲလိုတော့ မကြုံဖူးသေးဘူး ကျနော့်လောက် တက်စီစီးရတဲ့လူလည်းရှိပမလား မသိဘူး ။ အလုပ်က ညသန်းခေါင်လည်း ထသွားလို သွား ရတော့ တက်စီကို အပီအားပေးရတာ။ ည ၂ နာရီ သွားသွား ပြန်ပြန် စိတ်ချရတာတော့ သိတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကား ကောင်းကောင်းပြောတတ်တဲ့လူတွေနဲ့ ပဲတွေ့ သေးတယ်။ အများစုကတော့ ကျနော့ကို စလုံးမှတ်လို့ တရုတ်လို့ စ စ ပြောတာပဲ ။ အဲဒီမှာ စတွေ့ တာပေါ့ ဒီကလည်း တီလုတ်လို သိပ်သိတာဆိုတော့။AYE က သွားမလား PIE လား အဲလိုမေးရင်တော့ သိတယ် ။ အဲဒါလောက်တော့ တရုတ်လိုသိသေးတယ်။ နောက်ဆက်ပွားလာရင်တော့ သိတော့ဖူး ဟိဟိ။ အဲကျမှ ပေါ်တော့တာ။
မိုးယံ November 10, 2011 at 4:14 PM
ညိမ်းနိုင် November 10, 2011 at 4:34 PM
ဆိုရင် ဘာမှန်းမသိ ဘစ်ဂါးတော့တာပဲ....၊ကဲကဲ....ကျွန်တော်တို့လည်း ဘစ်ဂါး
Candy November 10, 2011 at 10:52 PM
Bigger the aircon lah... ha ha ha ရီရတယ်.. :D
blackroze November 11, 2011 at 1:49 AM
အချစ်တွေကို ဘစ်ကား စမ်းပါကွယ်..လို့ပြောရမှာပေါ့
jasmine(တောင်ကြီး) November 11, 2011 at 3:22 AM
MGTHANT November 11, 2011 at 5:32 AM
ဗစ်စတာရေ ကျွန်တော့်အလုပ်ကလည်း အဲအတိုင်းဗျ... ကျွန်တော်ကတော့ မျိုးစုံ ကြုံဖူးတယ်ဗျာ။
သတိထားပြီး ဗစ်ကားကြနော် ဟီးဟီး... အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျို့
increase the aircon လို့သုံးတာကော မှန်ရဲ့လားဗျာ ..
MGTHANT November 11, 2011 at 11:32 AM
ဟုတ်ကဲ့... တကယ်တမ်း မမှန်ပါဘူးဗျာ... ဒီမှာ ပြောတဲ့အခါ လွယ်လွယ်နားလည်အောင် ဒီလိုပဲ သုံးရပါတယ်။
'ဆိုပြီး တခါတည်း နားလည်အောင် ခပ်လွယ်လွယ်ပဲ ပြောလိုက်တယ်။' Post ထဲမှာ ရေးထားပါတယ်။
co coe November 11, 2011 at 8:49 PM
ကိုယ်ကတော့ ဖိနပ်ဝယ်တိုင်း one size bigger နဲ့ အလုပ်ကိုဖြစ်လို့ :-P
AH November 11, 2011 at 11:08 PM
ကိုမောင်သန့် ကျွန်တော် တစ်ခါ တက္ကစီ စီးတော့ ကားဆရာ မိုက်ခဲနဲ့တွေ့သဗျ။ တက္ကစီက အမဲကြီး ဈေးနည်းနည်းပိုပေးရတယ်ထင်တယ်၊ အမေရိကန်ထုတ်ကား နာမည်က ဘာလည်းတော့ မသိဘူး။ သူကတော့ ညွှန်းသဗျ စင်ကာပူ တစ်မြို့လုံးမှာ သူ့လောက် ခရီးသည်ကို ဖျော်ဖြေမှု့ပေးတာ သူပဲရှိကြောင်း၊ စင်ကာပူတစ်မြို့လုံး ကားစီးရင်း သီချင်းဆိုနိုင်တာ သူ့ကားတစ်စီးထဲရှိကြောင်း ပြောရင်း ကျွန်တော်က တစ်ပုဒ်၊ သူကတစ်ပုဒ် ဟဲလိုက်ကြတာ မီးပွိုင့်ကျတော့ ကံကောင်းလို့ ရှေ့က ကားကို ၀င်မဆောင့်မိတယ်။ ဟုတ်လဲဟုတ်တယ် သူ့ကားကြီးထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ ဆောင်းဘောက်ကလည်း မနည်း သီချင်းဆိုရင် ၀ုန်းဒိုင်းကို ကျဲနေရော၊ LCD ခပ်လတ်လတ်နဲ့ မိုက်တစ်လုံးပါသဗျ။ ပြီးတော့ မြန်မာသီချင်းနားထောင်ချင်တယ်ဆိုလို့ ကိုငှက်ကြီးရဲ့ ကြယ်တွေစုံတဲ့ ညတစ်ပိုဒ် ဆိုပြလိုက်သေးတယ်။ သူ ကပြောတယ် ဘာသာစကား ၉ မျိုးနဲ့ ဆိုလို့ရတဲ့ သီချင်း ခပ်လွယ်လွယ် ၉ ပုဒ်လောက် သူဆိုနိုင်သတဲ့၊ ကျွန်တော့်ကို မြန်မာသီချင်းဘာကောင်းလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း နဂါးနီ ဆိုပြလိုက်တာ အတော်သဘောကျသွားတယ်။ အဲ့ဒါ ပန်နီဆူးလာသွားဝယ်လို့ပြောလိုက်တာ။ မှတ်မှတ်ရရ အဲ့ဒီတစ်ခါပဲ အဲ့ဒီလို စီးဖူးတယ်။ နောက်တစ်ခါ မိုက်ခဲ တက္ကစီ စီးမိရင် တို့နဂါးနီ သီချင်းဆိုခိုင်း :)
MGTHANT November 11, 2011 at 11:46 PM
ဒေ၀ါလီခံရတဲ့ Chrysler ကားထင်တယ်။ ဟားဟား .. ကောင်းတာဗျာ.. တက္ကစီအကြောင်းတော့ ရေးရရင် ကုန်မယ်မထင်ဘူး
thz November 16, 2011 at 4:13 PM
ကို AH စီးဖူးတဲ့ကားမျိုးတော့ တစ်ခါလောက် စီးချင်ထာ
MGTHANT November 16, 2011 at 4:38 PM
ဟင်း အားကျတယ်ပေါ့ ဈေးကြီးပေးရမှာ မှားနေဦးမယ် :P
ဒုတ်ိယလူ May 1, 2012 at 6:17 PM
ကျွန်တော်ကတော့ တက္ကစီ ဆို